Tag: akara ngosi | Martech Zone
Tag: akara ngosi
Ntinye aka na Blog: Blogger Blogger
Wednesday, July 11, 2007 Tọzdee, Ọktoba 23, 2014 Douglas Karr
Blog m ọzọ na-atụnye aka bụ The Guest-Blogger Blog, Ebe ndị na-ede blọgụ kụrụ. Ọ bụ blog maka… um… ah… Ọ bụ um written ah dere ya Ka anyị gaa ndụmọdụ ahụ! Ndị a bụ ndụmọdụ Blog gị: Ana m atụ gị, n'ezie - mana onye ka ị bụ? Gịnị mere i ji nọrọ ebe a? Kedu ihe kpatara m ji gụọ blog gị? Ndị a bụ ajụjụ niile mmadụ nwere mgbe ha kụrụ blog na nke mbụ ya. Naanị m na-eche ihe kpatara ya
Wednesday, July 11, 2007 Thursday, October 23, 2014